အကြီးအကျယ် Porn Stash ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စီအိုင်အေသည်ဘင်လာဒင်တစ် ဦး တည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
ပြန်လည်ကြီးမားသော Porn Stash အပေါ်အခြေခံပြီး, စီအိုင်အေဘင်လာဒင်တစ်ယောက်တည်းပြုမူခဲ့ယုံတတ်
တို့၏အညစ်အကြေးအကြမ်းဖက်ကြံစည်မှုနှောင့်အယှက်, သူလျှိုအေဂျင်စီ Says
ဝါရှင်တန် (အဆိုပါ Borowitz အစီရင်ခံစာ) - ပါကစ္စတန်၌မိမိခြံဝင်းထဲကနေ porn တစ်ခုကြီးမား cache ကိုရယူပြီးနောက်စီအိုင်အေကယခုပြိုလဲအယ်လ်ကေးဒါးခေါင်းဆောင်အိုစမာဘင်လာဒင်နှင့် ပတ်သက်. အသစ်တခုသီအိုရီရှိကြောင်းယနေ့ပြောသည်။
“ အိုစမာဘင်လာဒင်တစ်ယောက်တည်းပြုမူခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ ပြီးတော့သူနိုးကြားတဲ့နာရီအများစုကိုအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်လွန်စေခဲ့တယ်။
မစ္စတာပန်နက်တာကမစ္စတာဘင်လာဒင်၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေမပါသောမေးခွန်းများစွာရှိနေသေးသည်။ “ သူမအိမ်ကိုမယားသုံးယောက်နှင့်ဝှက်ထားပုံနှင့်တူသည်။ ”
စီအိုင်အေကိုးမက်ထရစ်တန်ချိန်ကျော်အလေးချိန်ဖြစ်သောဘင်လာဒင်ရဲ့ညစ်ညမ်း stash, ဖယ်ရှားခြင်းထိုရက်သတ္တပတ်၏အများဆုံးသုံးစွဲသည့်အတိုင်းထောက်လှမ်းရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတို့က၎င်း၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ရည်ဝအောင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ "အများကြီးကာလ" သုံးဖြုန်းဖို့ရှိသည်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း Capitol Hill ပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဘင်လာဒင်၏ဓာတ်ပုံများကိုများလွှတ်ပေးရေးတို့အတွက်မှေးမှိန်ကား, မိမိကျယ်ပြန့် porn စုဆောင်းမှု၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖိအားရှိ၏။
ဆီးနိတ်လူနည်းစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell (R-KY) က“ ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးငါတို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ John Ensign ကဒီကိစ္စအတွက်မဟုတ်တာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။
ဘင်လာဒင်ရဲ့သှငျး ထား. porn အစာစားချင်စိတ် ပတ်သက်. ဗျာဒိတ်တော်များကိုအလင်းဆီသို့ရောက် လာ. , အမျှ, ထောက်လှမ်းရေးကျွမ်းကျင်သူများက porn ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကွက်ကမောက်ကမဖြစ်စေရန်အတွက်အမေရိကားရဲ့တစ်ခုတည်းသောစွမ်းအားအရှိဆုံးလက်နက်ခဲ့ကြပေမည်ဟုဆိုသည်။
စီအိုင်အေဒါရိုက်တာပန်နက်တာက“ ဒါသံသယမရှိပါဘူး။ "porn ကအမေရိကဘေးကင်းလုံခြုံစေခဲ့သည်။ "
ကျွမ်းကျင်သူများကဒီသစ်ကိုအကဲဖြတ်သည်ယနေ့ပါကစ္စတန်သံအမတ်ကြီးအမည်ရှိသောသူ Jenna Jameson များအတွက်ဂုဏ်ပြုတစ်ကွန်ဂရက်တံဆိပ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။